Farmaajo oo ka hadlay Shirka Shidaalka Somalia ee London
MUQDISHO, Somalia - Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shirka shidaalka Soomaaliya kaasi oo maanta oo Khamiis ah si rasmi ah uga furmay magaalada London ee cariga Ingiriiska.
Shirkaan oo soconaya maalmo ayaa dhaliyay muran ba’an, iyada oo ay kasoo horjeesteen xisbiyada mucaaradka ah ee dalka ka jira, iyo qaar kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee caasimada UK oo ka banaan-baxay.
Dadka dhaleecaynaya shirkaasi ayaa aaminsan inuu yahay mid lagu xaraasho kheyraadka wadanka, inkasta oo dowladdu dhowr jeer ay tilmaamtay inuu yahay mid suuq-geyn loogu sameynayo Saliida dalka.
"Kheyraadka badaheenna ayaan kusoo bandhigeena mana jiraan shidaal la iibinayo," ayuu Farmaajo ku jawaabay markii su’aal arrintaan ku saabsan looga waydiiyay shirka sanadlaha ah ee Garsoorka Somalia oo Muqdisho ka furmay shalay.
Madaxwaynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay siyaasiyiinta inay fasiraad qaldan ka bixinayaa shirkaasi, kaasi oo ay ka qaybgalayaan wakiil ka kala socda dowlada dhexe, maamulada iyo beesha caalamka.
"Siyaasiyiinta danaha gaarka leh baa Umadda jahwareerinaya, yeysana naga jahwareerin," ayuu hadalkiisa daba dhigay Farmaajo oo u muuqday mid ay maqaar xanuun-jisa hadalada kaga imaanaya xubnaha ka aragtida duwan.
Sikastaba ha ahaatee, su’aasha haatan taagan ayaa ah miyay shacabka ku qanci doonan hadalka Madaxwaynaha JFS, mise waxay uga baahan yihiin dowlada fahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirkaasi.
"Shidaalka Soomaaliya waa la sahminaayaa kaliya, waxa qeylinaayana waa Siyaasiyiinta Xanaaqsan," ayuu yiri Farmaajo.
Somalia: ​AMISOM oo ka guurtay Saldhig ku yaalla Muqdishu
Soomaliya 11.07.2017. 14:26
Villa Somalia oo fadeexad dhexda ka gashay markii ay xadey barjaamijka Uhuru
Soomaliya 02.02.2019. 14:32
​Shiinaha oo fidinayafaragelinta uu dunida ku leeyahay
Caalamka 10.07.2017. 21:35